Akhriso: Taliyeyaasha ciidamada dowladda iyo wasiirka amniga oo xalay si wadajir ah usoo saaray awaamiir cusub oo xasilinta caasimadda ah | Kismaayo24 News Agency
Akhriso: Taliyeyaasha ciidamada dowladda iyo wasiirka amniga oo xalay si wadajir ah usoo saaray awaamiir cusub oo xasilinta caasimadda ah
Saturday June 10, 2017 - 9:20 under Somali News by Tifaftiraha K24
Taliyeyaasha Ciidamada Booliska, Nabadsugida, Milateriga iyo Wasiirka Amniga ayaa caawa soo saaray awaamiir culus oo ku aadan xasilinta Ammaanka Muqdisho, iyagoo u digay cid alla cidii ka hor-timaada in tallaabo sharci ah laga qaadi doono.
Shir jaraa’id oo ay wadajir ugu qabteen caawa Xarunta Madaxtooyada ayaa waxaa ugu horeyn hadlay Taliyaha Ciidamada Nabadsugida C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo dareyska ciidanka xirnaa.
Taliye Sanbaloolshe ayaa sheegay in iska hor imaadkii maanta ka dhacay degmada Kaaraan aanu aheyn mid u dhaxeeya ciidamo, balse uu ahaa iska hor imaad dhex maray Ciidamada Xasilinta iyo Kooxo Burcad ah oo rabay inay raashin dhacaan, kuwaasoo uu xusay in gacanta lagu haayo.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in xakameyn fara badan la sameeyo, si looga hortago qaraxyada iyo amni darada, si buu yiri amniga u hagaago.
Sidoo kale Taliyaha Ciidamada Milateriga Jen, Cirfiid ayaa isna sheegay in laga baxo dhamaan guryihii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka, isla markaana lagu baneeyo illaa 1-bisha July.
Waxaa uu xusay in la sameyn doono xafiis 48-ka saac soo socda lagu diiwaan geliyo ilaalada ay wataan Mas’uuliyiinta, isla markaana lagu siiyo aqoonsi iyo dhar gaar ah, sidoo kale aan la ogolaan doonin in magaalada ay ku socdaan ciidan aan aheyn kuwa xasilinta.
Halkan Hoose ka akhriso awaamiirta Ammaanka:-